Easy Thermomix Recipes - Bika zvakapfuma zvakanyanya ndiro nenzira yakapusa | ThermoRecipes (Peji 6)
Iyi Smoothie yakaderera koriori yogati uye vise smoothie, ine hutano hwakanyanya, inozorodza uye inonaka, yakanakira kudya kana kutora pakati pekudya.
Octopus mu vinaigrette
Tasty octopus salad with vinaigrette and vegetables. Zvinovaka muviri uye zvine hutano chikafu chakakwana kana chisvusvuro.
ChiGerman mbatatisi mapatake (kartoffelpuffer)
Kartoffelpuffers zvakajairika zvechikafu cheGerman. Aya mapatake epatata echiGerman anoshandiswa neapuro compote kwatave takasanganisa kamasitadhi kadiki. Inonaka.
Horchata uye fig smoothie
Smoothie inozorodza yakagadzirwa nehorchata nemaonde, inokodzera vanhu vane lactose vasingashiviriri.
Salpicón ndeimwe yemazhizha yekubika par kugona. Nyore, nekukurumidza uye yakaderera mumakoriori.
Chickpea uye karoti kirimu
Iyi chickpea kirimu ndiyo yakanaka sarudzo yekuunza nyemba dzisingachinjiki mune chikafu chevana nevakuru. Iyo yakanyanya kupfava kirimu, iyo inogona kutorwa ichidziya kana kutonhora muzhizha uye kupisa munguva yechando, sechipunu dhishi.
Howa pamwe ham
Nyore uye zvine mutsindo howa zvine ham izvo zvatinogona kushandira sekutanga kana sekushongedza. Yakakwana chero nguva yegore.
Orange-inonhuhwirira apricot chipanje keke
Iri kerangi-rinonhuwirira apurikoti chipanji keke rine goridhe uye rakanyanya kunhuhwirira crumb. Izvo zvakakwana pakudya kwekuseni kana kutora masikati netii.
Zororo mojito yakanaka kunwa sechinwiwa chirimo chino.
Banana uye yogati mwenje ice cream
Chiedza chinonaka cheice cream kunakirwa ne dessert yakanaka. Yakagadzirwa kubva kubanana uye yogati, zviri nyore kwazvo kugadzira, isina shuga yakawedzerwa, ine hutano uye yakaderera mumacalorie.
Maeeks ane varoma muto ne romesco muto
Maeeks ane varoma anoshandiswa ne romesco muto. Iyo yakanaka yakaderera-mafuta yekutanga uye yakanaka kune vezvinomera.
French omelette negariki howa
Inonaka French omelette, yakagadzirwa negariki howa uye yakarungwa neparsley. Yakanakira yekukurumidza uye yakaderera macalorie madhiri.
Iyo vegan recipe yeavocado ine mint. Yakanaka seaperitif inoperekedzwa nema crudités.
Mutsva michero keke
Keke rakasiyana remichero, rakaderera mumafuta uye rakanakisa maererano nekuravira uye kugadzirwa. Zviri nyore kugadzira uye kutsva zvinonaka
Watermelon salmorejo kana watermelon porra inotapira inotapira inotonhora yemuriwo. Izvo zvakafanana ne gazpacho, asi creamier, ine yakanaka uye inonaka machira.
Cold melon uye cucumber cream
Inozorodza inotonhorera vise uye cucumber cream, yakashongedzwa nemindi uye yogati, yakanaka sekutanga kwemazuva anopisa. Yakagadzirira mumaminitsi asingasviki maviri.
Meatballs pamwe nemadomasi
Akanyanya nyore mabhora enyama anonaka: anotsemuka nekunze (nekuda kwebatter yavo yakasarudzika) uye ane muto mukati.
Kana paine chero mudiki asingazeze kudya legume iyi, edza kuti iite pizi neWurstel. Icho chikafu chinokwezva kwavari.
Yakakanyiwa huku ndeye nyore nyore nzira yekugadzirira. Izvo, mushure mekuzorora, zvinogona kushandiswa pakudya kwemasikati kuzere uye kwemanheru kana kushandira mune buffet
Yakasanganiswa Lentil Salad
Inonaka lentiy saladi, yakashongedzwa ne spice emulsion. Yakanaka sekutanga kwemazuva anopisa ezhizha.
vhezheni yeiyo chaiyo salmorejo, matinochinjisa tomato kune vise. Mhedzisiro yacho inonaka: kirimu nyowani chaiyo yezhizha. Zvinonaka.
Cream chipanje keke
Kugadzira kirimu kirimu seichi chine mashoma matambudziko. Izvo zvinongedzo zviri nyore uye kuzvigadzira hazvidi nguva yakawanda kwatiri.
Sipinachi nemapine nzungu, crab uye zai gratin
Sipinashi inonaka, ichiperekedzwa nemiti yemakonzo, mapine nzungu uye au gratin zai, rakanakira sedanho rakareruka uye rine mafuta mashoma.
Spaghetti muTorta del Casar
Creamy uye inonaka spaghetti, yakaravira muTorta del Casar chizi. Inokurumidza, yakapusa uye ine yakasarudzika flavour.
Muriwo wemuriwo wehuremu hwekudya
Muriwo wemuriwo kutora pakati pekudya iwe uri pane chikafu. Nzira iri nyore yekurwisa kuda kwako pakudya zvishoma kana zvishoma.
Taboulé, inotonhorera couscous saladi
Inozorodza taboule saladi, yakagadzirwa kubva kumunin'ina uye yakatemwa miriwo mbishi, ine bata risingazivikanwe wemindi. Yakanaka seshamwari.
Yakatapira yogati uye michero tartlet
Aya maTartlet anotapira akazadzwa ne yoghurt nemichero kirimu zvinonaka uye zviri nyore kugadzira chikafu, chakanakira kushandira nekofi kana tine vaenzi.
Tartlet dzakazara nesalmon mousse
Iyo salmon mousse tartlets inorapa mukanwa, chikafu chiri nyore uye chinokurumidza chekushamisa vashanyi vako pachiratidziro.
Inonaka Kesari saradhi, mune iyo inovhenekera nyoro yeletisi inosanganiswa neParmesan, croutons uye yakakangwa huku. Uye yakarungwa nemwaka wayo wakasarudzika.
Ice cream, kofi uye caramel smoothie
Uku kukurumidza uye nyore kuzunza kunoita yakanakisa inotonhorera dhizeti yekudya nevashanyi.
Super vhitamini C muto
Musanganiswa wemichero nemiriwo, yatinogadzira muto wakazara uzere nevitamini C.
Muorivhi mutema uye pashew pate
Iyo vegan yemiriwo pate, yakagadzirwa nemitema maorivhi uye nzungu dzemakwenzi. Uyu muorivhi pate chiyeuchidzo chakakura uye kuwedzera kwakasiyana-siyana kune mamwe madhishi senge pasita kana masaradhi.
Mutsva chena asperagus ine pistachio vinaigrette
Crispy uye inonaka yakasviba chena asparagus, yakashambidzwa pasi nechinonaka vinaigrette uye yakaputirwa nemapistachios akachekwa.
Beet uye walnut miriwo pate
Iyo yemiriwo paté yekupararira uye inozadzisa yakakura kune yemuriwo chikafu, sezvo iyo simbi, zvicherwa, antioxidants uye akakwana ehupfumi ebeet anosanganiswa nemapuroteni enati, akakosha mune vegan kudya
Howa uye ham frittata
Yakanaka howa uye ham frittata. Iyi tortilla isingashandurwe inoputika uye izere nekuravira nekuda kwehowa uye ham yakakangwa
Carrot uye lentil cream
Inokurumidza, yakapusa uye yakaderera-koriori dhishi yevana nevakuru: kirimu yekaroti uye nyemba, nyemba nemiriwo mune imwe dhishi.
Carrot pate ndeye vegan yemuriwo pate yakagadzirwa nemakarotsi uye walnuts. Inonaka uye inokwezva senzvimbo yekuvirisa kana yekudyira, yakapihwa nechingwa chakashambidzwa, nas kana mapancake.
Jasmine mupunga saradhi
Hutano hwakagwinya saradhi yakagadzirwa kubva kuJasmine mupunga uye akasiyana miriwo, tuna uye turkey, yakashambidzwa pasi nekamoni kupfeka.
Iyo yemonji chipanje keke recipe yakagadzirirwa kuti zvikamu zviviri zvibude. Izvo zvinozokutendera iwe kuti ugone kuzvifadza wega pasina kukanganisa dhayeti yevhiki rese.
Peach nekirimu chizi uye yogati
Dhizeti inokurumidza uye yakapusa kwazvo: pichisi musirasi ine chizi nyoro cream, yogati uye mukaka wakanyorovera
Salad emulsion, inoyevedza nzira yekushandisa patinenge tasara nesaladi. Yakanaka sekutanga.
Chiedza chemupunga nemiriwo uye maorivhi matema
Yakakura miriwo mupunga, yakaderera macalorie, uye yakanyanya mari, yakanakira kurwisa dambudziko. Yakakwana yechipiri kosi yevegans.
Apple, beet uye ndimu muto
Antioxidant uye detoxifying muto, wakaderera macalorie uye uzere mavitamini, ayoni uye mamineral, akakwana sekuwedzera kune huremu hwekudya.
Iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira aioli muto (allioli kana ajoaceite) yakagadzirwa neavocado. Inonaka uye yakapusa.
Inonaka Macho Nachos, kubva kuTex-Mex chikafu, chikafu chinonaka chekugovana neshamwari.
Chocolate expression brownie
Chocolate brownie yakagadzirira mumaminitsi manomwe. Inobikwa mu microwave. Inokurumidza, yakapusa uye inonaka, iyo mhando inonyangarika iwe usingaone.
Natural pineapple muto
Iyo yakasikwa pineapple muto, ine hutano hwakanyanya uye yakaderera mumacalorie, iine zvese zvivakwa zveinanazi, yakagadzirwa mumaminetsi matatu uye nemhedzisiro inoshamisa.
Yakarukwa turkey uye chizi tartlet ine rosemary-inonhuwirira maorivhi matema
Iyo inofadza inofadza: tartlet inonaka nekirimu chizi uye yakashongedzwa turkey, ine maorivhi matema, nekunhuhwirira kwerosemary. Yakakwana kune vana nevakuru.
Chiedza manhanga kirimu ne toast, ham uye mbeu yezuva
Starter yakajeka uye yakapusa yekugadzira asi panguva imwechete yakapfuma kwazvo uye iine hurukuro yakanaka Iyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekugadzirira manhanga kirimu.
Beet mousse neblue cheese cream
Iyo inovaraidza kwazvo aperitif yekudya kwemanheru nevashanyi. Yakanyanya nyore kugadzirira, inogona kuchengetwa mufiriji kusvika nguva yekushandira.
Bvuma tsuro inonaka
Tsuro inonaka uye ine muto inonamira mumafuta akasanganiswa nemishonga. Yakanaka sekosi yechipiri ichiperekedzwa nematota akadonha.
Strawberry bifidus yemvura yogati
Inonaka uye inogadzirwa bifidus yemvura yogati nemashiripiti echisikigo. Yakanaka kuwedzera kudyiwa kwemukaka nemichero muvana.
Inotapira makemikari akaunyana, akajairika eCanary Islands, akanaka sekushongedzwa kwenyama kana hove, kana sekutanga kana kuvhara. Shumira ne mojo picón muto.
Chokoreti mupunga pudding
Mumwe mupunga pudding uyo unokwezva kune akanyanya chocolatiers. Iwe unogona kuiravira uchifunga nezve zvaunofarira. Imwe nzira kana imwe, nguva dzose yakanaka!
Canarian tsvuku picón mojo muto
Yakanakisa uye inonaka tsvuku picón mojo muto, ichangosvika ichibva kuCanary Islands, yakanaka sedivi rematehwe akaunyana, nyama, miriwo kana hove.
Apple burger neIberian ham mutaundi chingwa
Anonaka gourmet apuro uye yeIberian ham burger nechingwa chemumusha, chose chakagadzirwa, chakanakira kudya zvine hutano kumba uye kurega chikafu chinokurumidza.
Peya uye ndimu muto
Inokurumidza, yakapusa uye yakaderera mumacalorie, iri peya uye muto wemonimu sosi yesimba, zvicherwa uye mavitamini. Yakaputirwa ne stevia.
Inonaka tapa yemapatatisi ine brava muto, inogadzirwa zvachose, yakanakira tapas chisvusvuro. Yakanakira vegans kana zvinomera.
Puff pastry yakazadza maekisi uye mbudzi chizi
Inonaka uye inokurumidza puff pastry, izere ne leek sham, mbudzi chizi uye oregano. Yakanakira mazuva ekuzvarwa uye zvekudya.
Green saladhi nema strawberries uye chokoreti vinaigrette
Chokoreti vinaigrette inosimudza saradhi inoshamisa yemashizha matema, mahabhurosi, chizi nemasheji. Musanganiswa unoshamisa mukuravira uye pamberi.
Iyo nyore nzira yakagadzirira mumaminitsi matatu: pickled mussel pâté. Mussels, tuna uye kirimu chizi ine dhayamita yakanaka uye inonaka.
Chickpea hummus ine curry kunhuwirira
Kunze kwekunze chickpea hummus nekunhuhwirira kwecryry, kwakanakira sekutanga kana chikafu chekudya kwemanheru. Yakakwana kune vegans uye kuti vana vadye nyemba.
Hamu uye tortilla inotenderera nemishonga yakanaka
Iyo ham uye tortilla rolls ine yakanaka mahebhu kugadzirira nekukurumidza kugadzira. Usakanganwa kuzviedza neyako yaunofarira chizi uye musanganiswa wemakwenzi akanaka aunofarira.
Chiedza chine munyu manhanga uye karoti makeke
Chiedza chine makeke machena, manhanga uye karoti, yakakodzera sekutanga kana kuperekedza hove. Yakakwana kune yakaderera-koriori chikafu.
Chokoreti chena coulant ine rima chokoreti moyo
Chokoreti chena coulant ine yakasviba chokoreti moyo, iyo inoratidzwa uye inodururwa, yakanyungudika, painosvika mukati mayo.
Rosemary anti-kutonhora infusion
Anti-kutonhora infusion kunoenderana nerosemary, huchi, ndimu uye ginger izvo zvinopa zvakakwana zvakasikwa zviwanikwa kurwisa dzihwa uye kudziya.
Mukombe wemichero yakaomeswa yogati uye sitirobheni jamu
Girazi rinonaka reGreek yogati, yakavezwa nenzungu uye sitirobhu jamu. Yakanaka sedhizeti yeZuva raValentine.
Crispy mbudzi chizi uye tenda hanyanisi cannelloni
Inotapira crispy filo pasta cannelloni yakazara ne mbudzi chizi uye zvakagadzirwa hanyanisi. Yakanaka sekutanga uye tudyo. Yakaderera mumafuta.
Strudel ine aubergine filo pasta uye salmorejo
Crispy filo pasta millefeuille, yakazadzwa neabergine, confit anyanisi uye ichiperekedzwa nesalmorejo. Yakanaka sekutanga uye vegan vanhu.
White hove burgers, inokurumidza uye nyore nzira, yakanaka kune vana.
Natural citrus uye karoti muto mumaminitsi matatu
Yakanakisa uye inonaka muto wepanyama, wakagadzirwa kubva kumakarotsi, maorenji uye ndimu, ine mavitamini uye zvinovaka muviri zvinodiwa kuti uwanezve kubva kufuru.
Anchovy ruomba spirals
Inonaka inoratidzira appetizer yechingwa chakachekwa chingwa chakamonerwa ne anchovy, garlic uye parsley butters.
Cheese sangweji ine tomato uye cheese sangweji ine walnuts
Iyo sangweji yechizi ine tomato uye cheese sangweji ine walnuts ndiwo maviri ehunyanzvi hweakakurumbira cheni yemasangweji Rodilla. Isu takawana pasita nekuravira kwakanyatsofanana nekwekutanga. Yakanakira kupemberera kwemhuri, kutanga kana tudyo.
Garlic huku yakabikwa muvaroma
Iyo yakanakira dhishi yezvakaderera-macalor chikafu: garlic huku, yakabikwa muhombodo yekugocha, yakanyoroveswa mumudziyo wevaroma.
Kiwi cream ine muesli
Chinonaka kiwi kirimu chakagadzirwa nemichero, yogati yechiGreek uye uchi. Izvo zvinofambidzana neyedu inodiwa muesli chichava chisvusvuro chakakwana kwazvo.
Chinanazi, orenji uye karoti muto
Natural muto wakagadzirwa nepainanazi, orenji uye karoti inotipa huwandu hwakawanda hwevhitamini nemaminerari. Uye izvozvo zvinotibatsira kudya michero kana miriwo mishanu pazuva.
Akabikwa gungwa mabass akabikwa muchoto aine maramu mumuto
Dzakanaka mabass egungwa kumusana, yakabikwa muchoto, ichiperekedzwa nezvinonaka zvinonaka zvine muto wegungwa. Yakanaka sekisimusi dhishi.
Cava uye pacharán cocktail
Chikumbiro cheEvha Idzva Idzva: iyo cava uye pacharán cocktail, uko kwatinozosanganisa inozivikanwa sloe brandy (patxaran, muBasque) necava uye orenji muto.
Tomato saladi ine chives uye basil-oregano vinaigrette
Zorodza madomasi saladhi nebasil uye oregano vinaigrette muto. Yakanaka kuperekedza yechipiri madhishi enyama kana hove.
Lemon Sorbet neCava
Izvo zvakakosha pazororo reKisimusi: yemonimu sorbet ine cava. Yakanyanya nyore uye inokurumidza kwazvo.
Chiedza chakabikwa nenyemba nezvinonhuwira uye lettuce
Chiedza chakabikwa nenyemba nezvinonhuwira uye lettuce. Yakanakira koriori yakaderera uye kudya kwemiriwo. Hutano hukuru dhishi.
Spaghetti nemafuta emuorivhi, gariki uye madomasi echerry
Iyi nzira yespaghetti inogadzirwa mumaminitsi makumi matatu nemashanu uye kushandisa chete Thermomix yedu. Nezvinhu zvakapfava tichagadzira nzira yakanaka.
Lemon curd inonaka inonaka curd kana kirimu. Nechekutsetseka kwemavara uye yakanyanyisa citrus kuravira Gadzirira iyo kuti ipe sechipo, shamwari dzako dzinochida!
Yakabikwa saumoni muswe pamubhedha wekirimu sipinashi
Inonaka yakabikwa saumoni muswe pamubhedha wekirimu sipinashi. Hutano, muto uye uzere nekuravira. Yakanaka sekosi kosi.
Puff pastry palmeritas ine tapenade de Provence
Crispy puff pastry emichindwe, izere neinonaka Provencal tapenade. Yakanaka senge yekufadza kana yekudya.
Zucchini mipumburu yakaputirwa ne feta cheese uye maorivhi matema
Zucchini rolls akafukidzwa ne feta cheese, maorivhi matema uye basil. Yakanakisa semwenje wechiedza weKisimusi.
Anti-kuchembera kwekuseni kuzunguza
Kukwegura inzira yekusanganisa iyo zviratidzo zvinogona kunonoka nechikafu chakazara muma antioxidants. Iyi kuzunza inotarisa zvivakwa zvayo pakurwisa zviratidzo zvinokanganisa ganda.
Mbatata omelette ine foie uye apuro
Juicy mbatata omelette kwatinowedzera foie neapuro, izvo zvinopa musiyano wemavara uye flavour. Yakanaka sekutanga kweKisimusi.
Iyo yakapusa iripi nzira yekugadzirira howa sekunaka. Inonaka ne chanterelles, rebollones kana rovellones.
Yakabikwa ham mousse croquettes
Kushamisa vadikani vako nemamwe makapu akabikwa akagadzirwa ham mousse croquettes. Nyoro, inonaka uye ine yegoridhe uye inonamira batter ... ndiani angaramba?
Iyi inonaka lemon pudding inofadza vadikani macitrus. Iyo yakapfava, yakajeka uye inotonhorera kwazvo. Zvakare, hazvidiwe kuibikira mune yekugezera yemvura.
Yakarongedzwa cod ine tapenade de Provence
Kudya kwemanheru kwakaringana: yakakangwa kodhi yakashongedzwa neinonaka tapenade nyowani kubva kuProvence. Zvakare zvakanaka sekosi yechipiri.
Aya mafluffy chorizo ​​muffin anogona kushandiswa ese seinonaka kana kugadzirira chisina kurongeka kudya kwemanheru. Unogona kuzvichengeta mubhokisi risina mhepo.
Cheese uye tuna tunza muminiti imwe
Delicious cheese uye tuna dip, yakanakira yekumwa kudya kwemanheru neshamwari. Creamy, inotsvedzerera uye yakasununguka. Yakakwana ne nas kana tostas.
Mushonga wemvura flu
Mushonga wechivanhu kumba wakazara vhitamini C, ine ginger uye huchi, muto wakanaka wekurapa kurwisa furuwenza, dzihwa uye dzihwa.
Tex-mex nyuchi fajitas
Delicious tex-mex fajitas inogadzirwa nemombe, hanyanisi, green pepper, uye muto muto. Zviri nyore kuita uye mumaminetsi gumi nemashanu chete.
Russian cauliflower saladi
Yakasiyana Russian saradhi, yakagadzirwa kubva kuholiflower. Yakanaka sekudya kwemanheru kana sekutanga kwechiedza pakudya kukuru.
Kutanga kubva kune yechinyakare panacota, iyo inonaka gelatinized cream flan, yakakangwa manhanga uye zvimwe zvinonhuwira zvinowedzerwa kusimudzira zvinwiwa. Mhedzisiro yacho dhizeti ine yakashata yekudonha mavhiri.
Yakasungwa tomato pate
Iyi ndeimwe yemidziyo pate iyo inobhururuka kana zvasvika patafura: iyo yakaomeswa tomato pate. Kuparadzira chingwa chakakangwa chakakura. Asi iwe unogona zvakare kuyedza nesaladi, nemadhipu kana crudités.
Deluxe Potato Sauce
Izvo zvinoitwa muchinguvana uye chichava chinoenderana chakanakira chedu chemba cheDeluxe Mbatatisi icho chatinogona kugadzirirawo neThermomix yedu. Hukuru!
Chokoreti dhizeti ine persimmon muto
Dhizeti iyo vanoda chokoreti vanozokoshesa. Nechitarisiko chekeke rechipanji, zvinoshamisika mukati: kirimu chokoreti inonaka!
Chicken curry chikafu chinonaka
Chicken curry delicatessen yakanyoroveswa nekirimu cheese yakanaka yekupararira pachigunwe. Yakakwana yekudyira pakudya kwemanheru kana misangano neshamwari.
Yakagochwa manhanga muto
Kirimu yemiriwo, yakaderera macalorie uye neese manakiro ehuni yakakangwa
Hamu uye cheese brioche spirals
Spongy brioche bundu remhepo, rakagadzirwa neham uye chizi. Yakanakira kuungana pakati peshamwari uye nemazuva ekuzvarwa nevana.
Iyo yakakurumbira croque monsieur sangweji yakagadzirwa ne ham, Emmental chizi uye gratin ine inonaka inogadzirwa béchamel. Yakanakira mabhureki kana tudyo.
Carrot kirimu colorá
Inonaka kerotsi kirimu ine mhiripiri tsvuku, yakanakira kudya kwemanheru uye kuona vhitamini kugoverwa kwemiriwo mune chikafu.
Zucchini nemaprawns mumaminetsi gumi nemaviri
Chikafu chiri nyore, chinokurumidza, chinoshanduka-shanduka, chisingadhuri uye chine hutano: zucchini ine prawns. Yedu Thermomix ichatarisira kuibika iyo mumaminetsi gumi nemaviri chete, iwe ungatsunga?
Inovaka muviri Smoothie yevana
Uku kuzungunusa mhinduro kune husiku ihwohwo, kazhinji nekuda kwekuneta, vana havadi kudya kwemanheru, mubatsiri mukuru wekusimbisa kudya kwemanheru nemapuroteni, mavitamini nemamineral, akagadzirwa mumineti imwe.
Antipasto di provolone nemadomasi
Yakanakisa yekutanga yeItaly inotapira provolone chizi nematomatisi. Yakanakira kugovana neshamwari uye nekuparadzira pane toast.
Zvinonhuwira Parmesan Pasita
Plate inonaka yepasta inonaka neParmesan. Perekedza nesaradhi yakanaka uye muchero wedhizeti uye uchave nechikafu chine hutano chakagadzirwa.
Hake neorangi muto
Chidyo chakareruka, chakaderera macalorie, zviri nyore kugadzirira uye nemhedzisiro huru. Hove dzinobikwa muVaroma nemuto weorenji, muto wakatsetseka unonaka semuto, uye vana vanozvifarira.
Yekutanga nzira - Salsa Rosa
Chikafu chekutanga, muto wepingi, wakanakira kuperekedza prawns, green salads, cocktaileta yegungwa uye masangweji kana makeke emiriwo.
Yehuku kirimu uye makarotsi
Izvozvi zvave kutanga kutonhorera husiku, ini ndinokurudzira iyi yakapfava uye yakapusa kirimu yehuku uye makarotsi ane zvinwiwa zvinobata kumini nekorianderi.
Nebhekoni, ine Serrano ham uye kunyangwe nehairi yakabikwa, aya mapea chikafu chemanheru chakakwana iwe chaunogona kuperekedza nembatatisi yakashambadza yakagadzirwa muThermomix
Coca-cola huku nekirimu muto
Iyo nzira iyo vana vako vachada. Inonaka inonaka uye inonaka huku, ine kunhuhwirira kunonaka kweCoca-Cola uye ine muto wakatsetseka-cream. Yakanakira vana sosi huru kosi.
Chinanazi kuratidza keke
Chinangwa cheinanazi chatinogadzira nemidziyo yakapfava uye kuti inotapira sei. Ne puff pastry, makedheni chinanazi, mazai ... iwe unofanirwa kuzviedza!
Roquefort muto wenyama kana hove
Inokurumidza kwazvo yakagadzirirwa imba roquefort chizi muto, mumaminetsi matanhatu chete, inozoperekedza nyama yako nehove kusvika pakukwana.
Shiraplant pamwe ham
Aubergines ine ham, dhishi rakareruka rakazara nemidziyo inogona kukwidziridzwa nechizi chakakangwa kana kushandiswa kuperekedza chero nyama yenyama.
Inonaka kofi kofi inonwa nechando, inotapira kwazvo uye yakafukidzwa nefuro.
Kirimu inotapira yeavocado, kottage chizi uye huchi
Avocado, kottage chizi uye huchi mukirimu inotapira, inonaka sedhiri rakasvibira rinofanira kudyiwa rinotonhorera, sekuzadza matartlet kana puff pastry kana kutsiva keke yekeke mumakeke uye mapeke.
Mango uye rum slush
Iyo inonaka mango granita cocktail, iyo inogona kugadzirirwa pamwe kana isina doro.
Mutsva karoti saladhi
Nyowani karoti saradhi idivi rerutivi iro rizere nekuravira uye ruvara. Ichachinja chero chikafu chisina kujeka kuita nzira yakakwana uye ine hutano.
Chirevo chiri nyore, chinokurumidza uye chinozorodza kwemazuva ano anopisa: peppermint gazpacho, kududzirwa patsva kwechinyakare gazpacho.
Yechokwadi Neapolitan muto, yakanakira kuperekedza yedu sosi ndiro, senge minced nyama ye lasagna Yakakwana kune vegans.
Yemunyu cocktail yemavise, mint uye kuratidza yogati
Munyu manwiwa, mindi uye kuratidza Greek yogati jongwe rakagadzirirwa muminiti imwe chete. Yakanaka sekutanga, kune yakaderera-koriori chikafu uye vegan chikafu.
Creamy girini risotto yakavakirwa pamuriwo muto, asiparagasi, celery uye leek. Yakanaka sekosi yechipiri yemidziyo yemidziyo.
Homemade bhengi muto inotora ketchup sehwaro, inowedzera zvinonhuwira zvakasiyana uye inova chinowirirana chakanakira masoseji, nyama yakakangwa uye mbatatisi.
Cold pesto muto
Iyi inotonhorera sosi inosanganisa izvo zvikuru zvinoshandiswa zveiyo Genoese pesto: basil, parmesan uye paini nzungu nekuwedzera evaporated mukaka uye kuigadzira yakasviba muto yakanaka yezhizha.
Zuva uye yebhuruu chizi pate
Creamy paté yemazuva uye bhuruu chizi, yakanaka seanoparadzira inopararira pachigunwe. Iko kusanganisa kunoita kuti kuve nekuputika kweakasiyana mafarati mumuromo.
Imba yekutepfenyura yekumedza chishuwo chako: vermouth chena inoperekedzwa nejusi remichero.
ChiJapanese teaspoon yetamato tartare ine mozzarella
Tomato uye mozzarella tartare, inounzwa mumaJapan mashupuni, akakodzera sekutanga kana divi renyama. Yakanakira vezvirimwa uye zvekudya.
Homemade yemasitadhi muto
Iyo yakagadzirirwa kumba yeiyo inotapira yemasitadhi muto, yakagadzirwa nemuchena yemasitadhi mhodzi, vhiniga, huchi uye zvakawanda zvinonhuwira, zvine bata pakati pezvinotapira uye zvine muto uye zvinonhuwira.
Quinoa ne feta cheese uye bhuruu
Isu takawana quinoa ine yakanakira recipe yevanodya nyama uye kudya kwakaderera-mafuta kwakavakirwa paquinoa ine blueberries uye feta cheese. Yakanaka sekushongedzwa.
Cold melon uye apple cream ine mint uye ndimu
Melon neapuro zvine chidimbu chemindi uye ndimu zvinopa fomu kune ino inozorodza inotonhora kirimu uye yakaderera mumakori (70 pakushanda). Iresipi inokurumidza uye yakapusa, yakagadzirira mune isingasviki maminetsi maviri.
Kusvuta salmon tartlet ine dhiri mvura
Kurumidza tartlet izere nefodya salmon cream, yakasaswa nedhiri rakaomeswa. Yakanaka seyakadyiwa uye anotangisa mwenje.
Zvibereko zvine curd cream
Mutsva muchero saradhi pahwaro hwecottage cheese uye uchi kirimu. Icho chikafu chakakwana chemangwanani, dhizeti inonaka uye dhishi rine hutano izere nemavitamini.
Mbatatisi mapekeki nechizi
Inonaka, iri nyore uye inokwezva kwazvo. Iyo keke rembatatisi, ine hanyanisi uye ham, inogadzira zvidimbu zviviri zvinotapira uye, pakati pazvo, zvinoparadzira chizi ... hombe
Inozorodza apple gazpacho, yakanaka sekutanga kurwisa kupisa kwezhizha. Zviri nyore uye zvinokurumidza kugadzirira. Yakanaka kune yakaderera-koriori chikafu.
Iyo inotapira yechinyakare inotapira kubva kuLatin America, iyo iri nyore kugadzirirwa muThermomix
Greek yogati ice cream
Inotapira uye inonaka yeGreek yoghurt ice cream, yakanakira vana kuti vapinze mukaka mukudya kwavo. Zviri nyore kugadzirira, ndiyo yakasarudzika dhizeti yezhizha.
Iyo chaiyo chaiyo pizza yeItari nekuda kwezvinhu izvo zvatichagadzira nayo: mashed mbatatisi, howa, howa, Parmesan, bharisamu kudzikiswa ...
Lemon keke recipe neThermomix: yakanaka, yakapusa, ine hutano uye inokurumidza kugadzirira. Yakanaka seyinonaka uye yekudya kwekuseni. Sponge keke inochengeta mazuva mashanu.
Yechokwadi uye yakasvinwa yakabikwa mint kofta, ichiperekedzwa nehama yemukoma, yakanaka senge hombe dhishi. Yakaderera mumafuta, yakakwana kune yakaderera-koriori chikafu.
Bhinzi chena hummus
Yakapusa nyore nzira yechena bhinzi hummus yatichagadzirira mumineti imwe neThermomix. Yakanaka sekutanga uye iyo munhu wese achada.
Natural piquillo mhiripiri yakazara neSpanish omelette
Recipe ye piquillo mhiripiri yakazadzwa ne mbatatisi omelette yakagadzirirwa neThermomix, yakanaka seanoshambadza kana seyinoperekedza nyama nehove.
Asia mupunga nemaprawuni
Asia mupunga recipe ne prawns uye soy muto uye ndimu kugadzira neThermomix. Yakanaka kune vana kana yakaderera-mafuta uye yakaderera-koriori kudya.
White mbatata uye ham saladi
Mbatatisi saradhi recipe nechena muto uye Serrano ham yakagadzirwa neThermomix, yakanaka sedivi kune ako ese ekudya. Wamboedza here?
Yogati uye peppermint muto
Recipe yekugadzirira yakasarudzika uye inozorodza yechiGreek yogati muto nemindi yekuperekedza miriwo uye crudités kana nyama yakakangwa. Kupfeka kwakakwana.
Mupunga pudding neorenji
Isu tinotsanangura maitiro ekugadzira iyo yekubheka yemupunga pudding neorenji uchishandisa iyo Thermomix, dhizeti inonaka yaunogona kugadzira pasina nguva.
Creamy mupunga ne paella kuravira
Creamy mupunga une paella flavour yakagadzirirwa neThermomix, yekutanga yakakwana yezuva nezuva sezvo zviri nyore kwazvo kugadzira uye nekukurumidza.
Chibereko chinozadza dumplings
Dzidza maitiro ekugadzirira muchero unonaka uchizadza madhiramu anodiwa nemunhu wese uye aunogona kutakura zvakanaka.
Huku uye mango zvinonaka
Dzidza maitiro ekugadzirira nyama yehuku uye mango, nyama uye michero zvinonaka zvinofambidzana nemuto wekunze waunogona kugadzirira neThermomix.
Gadzirira chinonaka cheGerman mbatatisi uye sausage saladi pamwe nezvimwe zvinongedzo izvo zvinopa ichi chinonaka chinotanga kubata kwakasarudzika.
Yakabikwa nyama yemupunga, pasita ...
Isu tinokuudza maitiro ekugadzira nyama yakakangwa yakakangwa, iine hunhu hwekunaka nekuda kwezvinonhuwira. Gadzira mapepa ako aine minced nyama tastier!
Gadzira muto unonaka wemultivitamin mune iyo thermomix kubva kukarotsi, orenji uye apuro. Inonaka, ine mavitamini mazhinji uye inozorodza.
Kolifulawa kirimu nehuku kuravira
Recipe yekoliflower cream ine hwema hwehuku, chikafu chine hutano chaunogona kugadzirira munguva pfupi kwazvo neThermomix.
Recipe yekuzadza matatu anonaka emasangweji: turkey neapuro, arugula uye roquefort, uye tuna ine walnuts muPort. Zvinonaka!
Sopu nechingwa dumplings uye ham
Sopu recipe nechingwa uye ham nyama mabhora muThermomix iwe aunogona kuperekedza nemupunga kana manodles. Yakapfuma kwazvo uye yakapusa kugadzira.
Papaya kirimu uye yakasviba chokoreti
Dzidza kugadzirira inotonhorera papaya kirimu ine yakasviba chokoreti shavings, inonaka dhizeti ine yakatsetseka dhizaini iwe yaunogona kugadzirira zviri nyore kwazvo neThermomix
York ham flan
Dzidza maitiro ekubika York ham flan uchishandisa iyo Thermomix uye unakirwe nechikafu ichi iwe chaunogona kugadzirira zviri nyore kwazvo senge yekutanga kosi kana sedivi dhishi.
Pheka saradhi inonakidza yemuchena coleslaw, matamba uye mazambiringa akaomeswa neiyi yakaderera-koriori nzira iyo iwe yaunogona kugadzira mumaminetsi mashanu chete.
Queson sandwiches inzira yakasiyana yekuratidzira cheesecake. Yakanaka sedhizeti, yakakwana kuvana Zviri nyore kwazvo kugadzira neThermomix
Mango neinanazi muto
Recipe yekugadzira mango neinanazi juzi, chinwiwa chine antioxidants, mavitamini C, B uye A, ayoni, yakafuma mune fiber uye yakaderera macalorie ayo anobatsira iwe kurasikirwa uremu
Chicken chiropa pate (huku foie)
Dzidza maitiro ekugadzira chiropa chiropa pate neiyo Thermomix, iri nyore nyore nzira yekugadzira yako wega chicken foie gras. Akapfuma kwazvo!
Banana uye mocha smoothie
Dzidza maitiro ekugadzirira bhanana uye mocha smoothie muThermomix, chinwiwa chakatsetseka, uko michero, cocoa nekofi zvinosanganiswa. Inonaka
Inonaka cuttlefish ine garlic, ichiperekedzwa nemayonnaise kana ali oli. Yakakwana sechikafu kana sekudya kwemanheru, inogona kudyiwa pane toast kana zvakananga se sangweji. Dzidza maitiro ekuigadzirira neyedu cuttlefish recipe yeThermomix.
King anoisa mumuto unotapira uye wakasviba
Dzidza maitiro ekugadzirira prawns uye yemumba inogadzira inotapira uye yakasviba muto neThermomix, nhanho-nhanho nzira iri nyore kwazvo kugadzira uye yakapfuma kwazvo.
Valentine mousse nema strawberries
Yakapfava uye inonaka mousse yaValentine nemastrawberry akagadzirwa nemukaka wakanyoroveswa iwe waunogona kugadzirira mumaminetsi maviri chete. Chii chauri kumirira kuti uzviedze?
Risotto ine apple uye curry
Iyo yekubheka yeItari yeiyo yekutanga risotto ine apple uye curry. Izvo zvinoitwa mukati memaminitsi mashoma makumi matatu neThermomix yedu. Kudya kuri nyore uye kwakapfuma kwazvo.
Aphrodisiac salmon uye avocado snack
Pheka chinotanga nesalmon uye uzere neavocado cream ne wasabi, musanganiswa wekunze uzere nekuravira kwaunogona kugadzirira muThermomix
Strawberry fondue ine chokoreti yakasanganiswa
Dzidza maitiro ekugadzirira inonaka sitirobheri fondue ine yakasanganiswa chokoreti muThermomix, inonaka uye inotapira dhizeti iyo yauchada.
Kiwi uye apple smoothie
Gadzirira chinonaka kiwi uye apple smoothie neiyo Thermomix, chinwiwa chizere nemidziyo uye mabhenefiti akakodzera ekuchengetedza kudya kune hutano.
Thaigostinos, prawns kubva kuThailand
Isu tinobika mamwe crispy Thai prawns, akagochwa kana kubikwa, akakodzera kune vekudya kwemanheru kana kwevaenzi. Iwe unoziva nzira yekuzvigadzirira?
Mbatatisi ine clams
Isu tinokudzidzisa iwe kugadzira matapiri nemakomba, chikafu chiri nyore kwazvo kugadzirira muThermomix uye munguva pfupi. Iyo chaiyo yekutanga kosi yekudya kwako.
Dzidza maitiro ekubika hove muto. Homemade, nyore kugadzira uye yakanaka kushandisa mune mamwe madhishi senge paella kana fideua. Inonaka kwazvo!
MaReki Uye Shrimp Keke
Pheka keke inonaka uye yekeke muThermomix, iri nyore, inokurumidza uye yakaderera koriori dhishi kugadzirira. Iwe unoziva kuzviita sei? Pinda uone
Baked lettuce recipe ne béchamel muto iyo yaunogona kuperekedza nebhekoni, york ham kana serrano ham kuti uipe iyo yakawanda kunaka.
Nutella korona keke
Nutella keke recipe, iri nyore kugadzirira muThermomix uye ine fluffy mhedzisiro kwazvo nekuda kwekuzadzwa kweiyi chokoreti kirimu.
Pasita souffle recipe, iri nyore kugadzirira, yekutanga dhishi ine isingadhuri uye inoshamisa zvigadzirwa. Kurudzirwa kuti uigadzirire, zviri nyore kwazvo.
Strawberry uye yogati semi-kutonhora
Strawberry uye yogati semi-kutonhora, yakasarudzika dhizeti yeKisimusi ino, yakavakirwa pamichero yechando. Gadzirira iyo mumaminetsi maviri chete!
Nyowani salmon tartare
Gadzirira yakanakisa nyowani salmon tartare neiyo Thermomix yekutenda kune ino irinyore-kugadzira-recipe. Zvakadaro hauna kuedza? Iwe hauzodemba.
Nyowani pasita nemukaka cream nekranberry-inonhuhwirira loin sausage
Nakidzwa pasita nyowani inonaka nemukaka kirimu ine cranberry-inonhuwirira loin sausage neiyi nzira yeThermomix
Iwe unoziva here kugadzirira remoni furo? Tsvaga kuti inogadzirwa sei neiyo thermomix nekuda kweiyo iri nyore uye yekukurumidza nzira yekuita. Yakakwana yemadhizeti!
Mussels mune yakasarudzika Christmas vinaigrette
Iyo mussels mu vinaigrette ndiyo inotangisa yekutanga kune chero kudya. Dzidza maitiro ekuvagadzirira pamwe neThermomix yekutenda kune ino nyore nzira.
Tsvuku yakasanganiswa doro rakapiswa mussels
Iyo yekuzvigadzirira yakasanganiswa mussels recipe, yakagadzirwa neruoko neThermomix. Tsvaga kuti ndezvipi zvinhu zvinodiwa kuti ubike.
Unofarira hanyanisi here? Dzidza kuvabika nekapepeti iri nyore yekushandisa iyo Thermomix uye unakirwe neiyi yakaderera-calori dhishi
Tuna mousse recipe yeThermomix, chikafu chinonaka chaunogona kushandisa kuparadzira kana kusanganisa musaradhi kana saradhi.
Banana uye michero yakaomeswa plum-keke
Banana uye nzungu plum-keke recipe yakanaka pakudya kwekuseni kana tudyo. Gadzirira iyo neThermomix munguva pfupi uye uwane mhedzisiro ine muto
Creamy mupunga nemanhanga
Pheka mupunga wakasvibira nemanhanga uye unakirwe neiri yakasviba mupunga dhishi rakagadzirwa neThermomix pasina nguva. Zvakadaro hauna kuedza?
Kusvuta salmon tartare
Yakaputa salmon tartare recipe yeThermomix, iri nyore kwazvo kugadzira uye nemhedzisiro padanho revapiki vakanyanya. Zvakadaro hauna kunge waedza?
Autumn inonaka tart
Autumn inonaka keke recipe neBoletus iyo inogona kugadzirirwa nemamwe marudzi ehwahwa kana howa, inonakidza kwazvo uye nyore kugadzira muThermomix.
Mhungu yakadonhedzwa mazai
Kutsvaga mabikirwo eHalloween? Tsvaga maitiro ekugadzirira inonaka tuna akaomeswa mazai akashongedzwa kunge ari dandemutande. Chikafu chiri nyore kwazvo.
Mini gourmet burger
Chidiki asi inonaka inonaka recipe ye gourmet mini burger yakafukidzwa neguacamole, yakazara nembudzi chizi. Vape kuedza!
Cream nemaabhuribheri uye mapine nzungu
Gadzirira kirimu inonaka nemabrackberries nemapine nzungu, dhizeti iri nyore kwazvo kugadzirira uye nemhedzisiro inonaka mumaminitsi gumi chete. Yakakurudzirwa!
Chokoreti Petit Suisse
Homemade chokoreti petit suisse recipe yakagadzirwa neThermomix, dhizeti inodiwa nevana uye yaunokwanisa kuchinjira kune mamwe mavhenekero.
Salmon skewers ine tsvuku pesto
Recipe yekugadzira salmon skewers yakapfekedzwa nered pesto, iri nyore uye inokurumidza kutanga kana yekutanga kubika neThermomix.
Dzidza maitiro ekugadzirira kofi yeIrish neThermomix. Iwe unoziva zvigadzirwa zvaro? Vazvizive uye dzidza kuti chinwiwa ichi chinoitwa sei nekofi, whiskey nekirimu.
Mbatatisi nzira yekushongedzwa yakagadzirwa neThermomix, yakanaka kune nyama kana hove. Perekedza chero yechipiri dhishi neaya anonaka matapiri
Green maorivhi pate ine orenji kunhuwirira
Pheka neThermosmix tatoo yakapfuma yemiorivhi yakasvibira ine kunhuhwirira kweorenji, iyo yekutanga imba yaunogona kuzvigadzirira nyore nyore neiri nyore nzira.
Mazai akatswanywa nehowa, bhekoni uye chizi
Gadzirira mumaminetsi gumi nemashanu mazai akakwizwa ane howa, bhekoni uye chizi ine iyo thermomix, iri nyore nyore nzira iyo yatichatsanangura nhanho nedanho. Yakakurudzirwa.
Shandisa iyo Thermomix kugadzira chibereko porridge nemakuki uye yekuzvigadzirira yoghurt, nzira yakanaka yevana kubva pamwedzi minomwe.
Spaghetti ine yakasikwa tomato uye mozzarella
Yakareruka asi yakapfuma spaghetti ine yakasikwa madomasi uye mozzarella, iri nyore nyore nzira yekuita kuti isu titsanangure nhanho nhanho. Hauna kuvaedza here?
Pasita uye miriwo ribhoni ine chizi muto
Iropepeti yepasta uye yemarabhoni marabhoni ane cheese muto iri nyore uye yakakwana kwazvo. Isu tinokuratidza maitiro ekubika iyi dhishi nhanho nhanho neiyo Thermomix.
Gadzira hupfu hwechickpea nyore neThermomix. Iine iyi resipi yeupfu hwehuku hwechigunwe zviri nyore kwazvo kupinza nyemba muchikafu chedu.
Inverted pineapple keke
Yakanaka uye inokwezva pineapple keke kutapira masikati kune vashanyi vako.Iyi inverted pineapple cake ine muto kwazvo uye ine yakanaka kwazvo mharidzo
Gadzira chaiyo Nestea yakagadzirirwa pamba, neese tavhu yeti nhema uye nekunakidza kubata kwecitrus iyo ndimu inopa. Hapana chimwe chinopa hutano uye chinozorodza.
Moroccan karoti saladhi
Karoti uye yakaomeswa michero saladhi zvichibva pane yakasarudzika Moroccan recipe Nekuda kwekunaka kwayo kwakasarudzika, zvinonhuwira kwazvo, inogona kutorwa sekutanga kana sekushongedzwa.
Zvinonhuwira cherry muto
AMAZING anonhuwira cheri muto. Yakanaka kuperekedza nyama uye cheeses, nekuda kwekuravira kunopihwa ne ginger uye chilli.
Dzidza maitiro ekugadzira inonaka Panacota neuchi neiyo Thermomix. Dhizeti nyowani uye yakatsetseka iyo vashanyi vanogara vachida.
Steamed monkfish ine tomato muto uye mint
Steamed monkfish iri nyore nzira, inofarirwa nevana nevakuru, uko hove inogadzirwa nemhepo kubva mumuto, ichisiya iine muto uye nyoro.
Chena chokoreti kirimu
Inonaka chena chokoreti kirimu iyo, yakashanda inotonhora zvakanyanya, ichave iri dhizeti yakanaka nekuda kwekunakidza kwayo uye kugadzirwa, kunyanya kune vanoda chokoreti.
Mazai akaiswa mussels
Nyore yakapetwa mazai recipe yeThermomix. Iwo ari nyore kwazvo kugadzira uye kushanda seanotapira, pati kana kosi huru.
Apple, roquefort uye walnut sangweji
Iyi inotapira sandwich pasita inokushamisa iwe neayo nuances. Iyo yekubata inobata inopihwa neiyo roquefort, iyo acidic apuro uye manyoro walnuts.
Neiyi guacamole isu tichafadzwa neyakagwinya uye inonaka inofadza iyo yekuperekedza kudya kwemanheru neshamwari. Isu tinongoda zvinonaka uye tonyorova!
Chokoreti nyoro-isina kirimu-
Iyo itsva vhezheni yechokoreti mousse. Nekunaka kwakanyanya kwechokoreti yakasviba uye isina kirimu.
Madhiri anonaka akafukidzwa neArzúa chizi. Iyo bundu rinotonhorera zvakare risingadhuri uye nyore kugadzirira.
Chicken inofadza nemayonnaise
Creamy huku inonaka neyakagadzirwa mayonnaise, yakanaka sekutanga kana se sangweji yekuzadza iyo yatinogona kushandisa kune tudyo uye mazuva ekuberekwa.
Crunchy nzungu makuki
Aya makeke anotsemuka enzungu akakodzera kuperekedza patés, cheeses uye kupararira.
Chicken skewers ne nzungu muto
Kushamisika vashanyi vako nechinonaka chehuku skewers nepeanut muto ... havangatombosiya zvimedu !!
Lemon yemvura yogati
Liquid yogati ndicho chinozorodza chinwiwa chakagadzirwa zvakanyanya nemukaka uye ndimu. Izvo zvakare zvine hutano uye zvakakwana kune anopisa masikati
Anoshamisira emavara rolls ayo anogona kushandiswa seanofadza kana yekutanga kosi.
Turkey ine aubergine muto
Yakadzikama recipe yakavakirwa yakakangwa turkey ine yakapfava uye inonaka aubergine muto.
Orenji uye mango muto neime chinonhuwira
Orange nemango zvinonwiwa nekutsetseka kwakanaka uye kugadzirwa kwakanaka, nekubata kwekupedzisira kweimu inoita kuti ive nyowani.
Hake nemonimu pamwe nekukomba
Inonaka inonaka dhishi yeake ine ndimu iyo inotibatsira kuti tive nezvakawanda uye zvine mwero kudya
Moroccan Shiraplant Saladi
Inonaka uye inonaka yeMoroccan saladi yakagadzirwa nemaabergines akapfava nezvinonhuwira zvinogona kugadzirirwa pamberi.
Taura grapefruit uye tangerine muto
Muto wakasikwa uye wakagadzirwa mumba unoita kuti umutse pfungwa dzedu dzese nekuda kwekuravira kune grapefruit
Mbatata uye ham saladi
Iyi mbatatisi uye serrano ham saladi yakanyatsoita zvekuti tinogona kuishandisa sedhishi rimwe chete rekudya kwemanheru kana kuendesa kuhofisi.
Papa aliñá ndeyechinyakare yeSpanish gastronomy, inogadzirwa nezvinhu zvakapusa uye nyore kugadzirira.
Tsvaga maitiro ekugadzira keke rebhanana neresipi yedu. Izvo zvakakwana kutora mukana wemabhanana ari kutipfuura mundiro yemichero. Recipe yekugadzira neThermomix, nekukurumidza uye nyore
Inotapira uye crispy puff pastry nyere dzakazara nesipinashi, ricotta chizi nemapine nzungu.
Nhema Sango Keke
Keke rinonaka rakagadzirwa nesiponji keke yakanyoroveswa nekirsch uye izere nechokoreti truffle. Inogona kushandiswa kupemberera mazuva ekuzvarwa kana mhemberero.
Chiedza chickpea stew
Nema chickpeas mashoma ari nyore unogona kukurumidza uye zvisingadhuri kugadzira chikafu chemazuva anotonhora. Zviri nyore kutakura uye zvinogona zvakare kugwamba.
Iyi bhanan smoothie inokurumidza kugadzira. Nzira inonaka yekunakidzwa nemazuva ane husimbe. Zvakare zvakanaka zvekudya zvekudya uye mazuva ekuzvarwa.
Mitauro yekati ingori gadziriro yakapusa yekutora mukana nemazai machena atinawo mufiriji kana mufiriji.
Matata mbichana eItaly
Mhando yeItaly-mashed mbatatisi akakwana sekuperekedza kune yakawanda ndiro. Imba yakagadzirwa pamba, ine hutano uye isingadhuri.
Dendere rebhinzi rakasvibirira
Dendere rebhinzi rakasvibirira idhishi randinokurudzira kana uchida kudya zvine hutano uye zvine hutano. Zviri nyore kuita uye kuti mharidzo yakasiyana.
Iyi chickpea hummus recipe ndeyekare. Inokosha mumenu inonaka yeArabic cuisine kana mune chero tudyo.
Mupunga uye yogati saradi
Murairi saradhi ne yogurt kupfeka iri yezhizha recipe. Inogona kugadzirirwa pamberi, saka paunosvika kumba yakatogadzirwa.
Iyo sobaos uye sitirobheri pudding inzira yekushandisa kushandisa iyo sobaos kana muffin nemastrawberry atinawo kumba.
Chitubu Chickpeas kamukira inobatanidza nyemba nemuto unokurumidza uye nyore kugadzira. Shandisa kakabikwa chickpeas kuti uderedze nguva.
Iyo inoshamisa recipe ye marinated tuna ine yekumabvazuva dhizau sosi Zviri nyore kwazvo kuita asi zvinotora maawa mashoma kuti iite nhumbu zvakanaka.
Mango uye cardamom lassi
Mango uye cardamom lassi inonaka uye inokurumidza kamukira. Icho chinwiwa chakanakirwa kunakirwa inopisa yezhizha masikati. Yakagadzirwa nemukaka nemichero.
Pasi-Gungwa rine munyu keke
Mune ino nyika ine munyu uye keke regungwa, howa, prawns uye tuna zvinosanganiswa. Nenzira yakapusa tichava nekeke rekudya kwemanheru
Special juice yeapuro
Iyi inonaka jusi remaapuro inogadzirwa kubva kumichero yema citrus uye kubata kweapuro iyo inoipa iyo inozorodza nzvimbo inozorodza. Yakakwana pakudya kwemangwanani.
Spicy noodles nematomatisi uye maorivhi
Spicy noodles nematomatisi uye maorivhi inzira yekushandisa yakakwana yekugadzirisa kudya kwemanheru kana chikafu chinokurumidza.
Inonaka uye inokurumidza cod dhishi. Inoshumirwa semazai akatswinywa ane mbatatisi yemashanga iyo inozoita kuti inakidze zvikuru kune vadiki vari mumba.
Kurumidza Gelatin Keke
Shamisika vashanyi vako nekakareruka uye nekukurumidza jelly keke. Mumaminitsi gumi uye nguva yekuzorora unenge uine keke rekudya kwemanheru neshamwari.
Iyi sitirobheni compote ndeyechinyakare sadza. Mumaminitsi asingasviki gumi nemashanu tichava takaita kuti compote iyi ive yakakwana kuperekedza ma yogati uye echando mafuta.
Shamisika vashanyi vako nenyama coulant. Yakagadzirwa nenyama, matomatisi uye mbatatisi yakachekwa. Yese iyi gratin uye neisina kurongwa mharidzo.
Ndiani asingazive iyi yakasarudzika tuna keke recipe? Yakakwana yekuungana kwemhuri kana yekudyira zvisina kurongwa, nekukurumidza uye yakakodzera kugadzirira mune microwave.
Mbatata yakabikwa zvisina kunaka
Iyi nzira yeti mbatatisi isina kubikwa ndiyo nzira yekutanga yeIsita. Zvisungo zvaro zvakapusa zvichatibatsira kugadzirisa bhajeti redu.
Pomegranate, tuna uye sitirobheni vinaigrette saladi
Iyi yekutanga sitirobheri vinaigrette inozotishandira kupfekedza masaradhi edu ane akasiyana matetisi kana kunyange mupunga.
Pinto bhinzi newaini tsvuku
Mutsara wakajeka uye wakaoma wokupemberera Lent uye Easter.
Iwo akanyanya kunaka echinyakare eIsita anofashukira mukicheni medu nemabikirwo akaita seiri remadonati akakangwa.
Pasita & Pesto
Gadzirira chikafu chinonaka cheItaly zvichibva pasita ine pesto yekuzvigadzirira uye ichave yako yaunofarira kudya. Yakanyanya nyore kudyira kunze.
Kumusoro pasi petainapple tart
Iyo pineapple inverted keke yakakwana kune vanotanga nekuti haizodi kuve yakashongedzwa. Inokurumidza kugadzira uye kuravira kunonaka.
Muffin ane ham nemiriwo
Aya ma muffin anonaka isarudzo huru yekutora parwendo rwekumunda, kumahombekombe, kana kunyangwe kudya kuhofisi. Edza ivo, hauzombozvidemba!
Chokoreti chena brownies nemapistachios
Usapotsa pane ino yekutanga recipe yechena chokoreti brownies ine yakashata pistachio kubata. Iko kusanganiswa kwakakwana!
Grapefruit, sitirobheri uye basil muto
Mune muto wemazambiringa uyu, zvigadzirwa zvine hunhu hwakawanda zvakasanganiswa zvinozomutsa pfungwa dzedu.
Nechi resipi yehuku tinogona kugadzirira nyama inotonhora inotonhorera. Imwe nzira ine hutano uye ine hutano kumaseji emagetsi.
Cream uye Strawberry Flan
Kutsvaga kamukira kuti utore mukana wemapurobhero ako akasara? Sei usingaende kunotsvaga iyi sitirobheri uye cream cream? Zvinonaka !!
Special jisi reranjisi
Iyi jisi reorenji ine karoti ichatipa isu tese mavitamini anodiwa uye zvicherwa kutanga zuva rizere nesimba.
Quiche Lorraine Yakashandurwa
Iwe unotsunga neiyi yakashandurwa Quiche Lorraine? Iyo keke rinonaka rinozoita kuti madhiri ako akwezve uye anakidze kunyanya kune vana.
Kushamisika vashanyi vako neiyi prawn curry. Sevha nayo nemupunga uye uchave neresipi iyo inozokuendesa kunzvimbo dziri kure uye dzisiri dzekunze.
Mascarpone uye keke reapuro
Kurumidza uye nyore gadzirira yakasviba mascarpone uye apple chipanje keke. Iwe unozoshamiswa nemhedzisiro!
Mbatatisi yakazara neBacon
Tsvaga maitiro ekugadzira mamwe mbatatisi yakashongedzwa neyedu Thermomix uye microwave. Iwe unenge uine iripi yekukurumidza uye yakakwana kwazvo yemanheru kana yechipiri kosi.
Risotto ine foie uye howa
Iyo risotto ine foie uye howa idyo iri nyore kugadzirira neThermomix. Iko kunhuvira kwayo kunozokuendesa iwe kune iwo akadzikama mazuva echando.
Yakarongedzwa pizza kuruka
Iyo pizza kuruka ndiro idyo iyo vana vachada. Yakakwana kugadzirira mazuva ekuzvarwa kana mapato asina kurongwa.
Kefta tagine (Maroc)
Nakidzwa neiyi kefta tagine recipe yeiyo chaiyo Moroccan dhishi yakashandisirwa kune yedu chikafu.
Iwe unoda here isingakanganisi nzira yekuti vana vako vanwe mukaka nemichero? Edza iyi sitirobheni smoothie. Yakakwana zvakakwana kune vegans.
Iwe unotsunga kugadzira rako rako bota nesu? Inzwa wakasununguka kuzviita kana kuzviravira nezvinonhuwira zvako zvaunofarira.
Shamisa vana vako neiyo chaiyo Doraemon dorayakis. Chikafu chekutanga uye chine iwo wauchanakidzwa neshamwari dzako.
Nakidzwa nechinwiwa chinozorodza uye dzorera simba rako neiri orange smoothie. Unongoda maminetsi maviri.
Hake mu piquillo muto
Nakidzwa neresipi inonaka yehove ine piquillo muto. Iyo yekubheka inonaka iyo ichakubatsira iwe kunongedza madhishi ako.
Chokoreti uye pistachio chipanje keke
Edza iyi kamukira yechokoreti uye pistachio keke. Iwe uchafarira mutsauko wayo weavhenji. Zvakare zvakare kutakura.
Hake nealmond muto
Iyo muto weamondi yakakwana kuperekedza hove chena. Zviite ivo muvaroma uye iwe unogona kusevha nguva nesimba.
Mumaminetsi mapfumbamwe iwe unenge uine kirimu inotapira uye isingadzivisike. Yakanaka kupfeka uye kunakirwa mumusangano usina kurongwa.
Natural Strawberry Dalky
Unoda here dhizeti yekushandisa nayo yakawandisa yemastrawberry? Edza iyi dalky recipe, iri nyore, inokurumidza uye inonaka.
Isu tinokuratidza maitiro ekugadzirira ketchup nezvinhu zvakasikwa. Pasina zvinodzivirira uye mavara ekugadzira kuitira kuti vana vako vafarire zvakanaka.
Gakanje rinonamira mumuto wavo
Kudya kwemanheru mumaminitsi gumi nerimwe? Kana zvichibvira !! Edza iyi nzira yezvimiti zvegakanje mumuto wavo uye uchaona kuti zvinokushamisa sei.
Nyore apple pie
Farira zvese zvinonaka neiyi apuro pie. Uchaifarira nekuti inokurumidza uye iwe unogona kutora mukana nemaapuro kubva mundiro yemichero.
Cod ine citrus bota
Isu tinopa recipe yekodhi neese kunhuwirira kwecitrus. Zviri nyore kuita uye unogona kuenda nazvo kuhofisi.
Broccoli uye manhanga ane mbatatisi yakachekwa
Tsvaga maitiro ekugadzirira dhishi ne broccoli uye mimwe miriwo yevana nevakuru. Wira murudo nehunhu hwayo uye mavara.
Tsvaga maitiro ekugadzira peach tart necustard uye yakafukidzwa mukirimu. Kufara chaiko kwaunogona kushandisa pamazuva ekuzvarwa.
Pasita ine howa
Hauna nguva yakawanda yekugadzira chikafu? Nakidzwa neicho chaicho ndiro yepasta ine howa nekukurumidza.
Nguruve mbabvu nebarbecue muto
Iwe unoda kugadzirira pani yembabvu kumba uye iwe hautye? Tarisa uone uye iwe uchaona kuti zviri nyore sei uye zvinonaka zviri pamwe neayo barbecue muto.
Flamenquines ine yakashongedzwa
Iwe unofunga flamenquines haisi yako here? Edza iyi huku-based vhezheni yakashongedzwa nesipinashi uye howa.
Wakaneta nezvakajairwa mafuta. Edza iyi kirimu yekoliflower. Iwe unozogutsikana nekunyorova kwayo uye kugadzirira kwayo kuri nyore.
Wedzera mamwe mapundu echikafu uye iwe unozoshandura iri nyore pea kirimu muhope yakakwana yekupemberera Zuva raValentine.
Pasita ai funghi
Gadzirira iyi ai funghi pasta recipe uye unzwe kunge chaiye mutungamiriri weItaly uye unakirwe nekunakirwa kwematsutso.
Kanganwa nezvemaindasitiri mafekitori. Nhasi tinokuunzira iyo yakasarudzika uye yakasarudzika vhezheni yeDoowaps.
Valentine's puff pastries
Isu tinokumbira iwe imwe yekuputa pastry iwe yaunogona kuzadza neyako aunofarira zvigadzirwa Shongedza ivo uye iwe uchave uine yakanaka nzira yezuva reValentine